पछैमा ‘रावण पार्क’ निर्माण शुरु – धौलागिरी खबर
पछैमा ‘रावण पार्क’ निर्माण शुरु
धौलागिरी खबर	 २०७८ माघ १७, सोमबार २०:२९ गते मा प्रकाशित 127 0
बेनी, १६ माघ । म्याग्दीको पौराणिक स्थल पछैमा रावण पार्क (उद्यान) निर्माण शुरु भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उद्यन मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ मा पर्ने पछैमा रावण पार्क निर्माण शुरु गरेको हो । वडा अध्यक्ष लक्ष्मण बानियाले ठेक्का पाएका निर्माण ब्यवसायी पार्क निर्माणका लागि परिचालन भएका जानकारी दिनुभयो ।
“परिकल्पना भएको एक दशकपछि रावण पार्क योजना कार्यान्वयन शुरु भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “रावणको मुर्ति बनाउनेसँगै पछैमा आएर प्रारम्भिक चरणको काम शुरु गरेका छन् ।” रावण पार्क बनाउन गत भदौमा काठमाडौको धर्मा एस कास्यप जेभीले गत भदौमा रु. एक करोड ७६ लाख ७७ हजार ५६३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
बेनी नगरपालिकाका इञ्जिनियर बिमलरञ्जन कार्कीका अनुसार ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम कबोलेको धर्मा एस कास्यप जेभीसँग सम्झौता भएको हो । “पर्यटन मन्त्रालयले रु. दुई करोड ११ लाख र नगरपालिकाले रु. एक करोड १४ लाख बिनियोजन गरेर ठेक्का आव्हान गरेका थियौ,” उहाँले भन्नुभयो “पहिलो चरणमा रावणको मुर्ति, बगैचा, बिश्राम स्थल लगायतका पुर्बाधार तयार पार्न लागिएको हो ।”
निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर सन्तोष ओझाले काठमाडौमा रावणको मुर्ति तयार पार्ने काम भैरहेको जानकारी दिनुभयो । पछैमा पार्कका अन्य संरचना बनाउन पनि शुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । २०७९ पुष महिनामा रावण पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पुलह पुलत्स्य क्षेत्रको चार रोपनीमा रामायण पार्क बनाउन लागएको हो । हालको मन्दिर, हवन कुण्ड, रावणको नाबी गाडेको ठाउँलाई यथावत राखेर पुर्बाधार बनाइने भएको छ ।
डिपिआरमा परिकल्पना गरिएको रामायण पार्क । तस्बिर धौलागिरी खबर
हिन्दु धर्मग्रन्थ भागवत रामायणको पाँचौ अध्यायमा रावणको जन्म पछैमा भएको उल्लेख छ । पुलह, पुलत्स्य र भरत ऋषिले पछैमा तपस्या गरेको रामायणमा ब्याख्या गरिएको छ । बि.स. २०६६ मा म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठ लगायतले धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर बेनीमा रामायण पार्क बनाउने योजनाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ।
पछैमा पौराणिक महत्व झल्कने किसिमको रावणको आकर्षक मुर्ति राख्ने, बगैचा निर्माण, नाबी गाडेको लगायत ठाउँको संरक्षणका लागि पुर्बाधार र दुई सय मिटर कालोपत्रे गर्ने योजना छ । बि.स. २०७४ देखिनै बजेट बिनियोजन गरेपनि ठाउँको बिवाद र स्रोतको अभावमा रामायण पार्कको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । मुक्तिनाथ प्रवेशद्धार गलेश्वर, पुलाचौरको पछै, जगन्नाथ र टोड्के क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक कोरिडोर बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
समुन्द्रि सतहदेखि दुई हजार मिटरको उचाइमा अवस्थित पछैबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, निलगिरि हिमशृङ्खला, सुर्योदय, बेनी बजार लगायत म्याग्दी, पर्वत र बागलुङको मनोरम दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । बेनी बजारदेखि गाडीमा तीस मिनेट यात्रा गरेपछि पछै पुग्न सकिन्छ । बेनी अर्थुङ्गे सम्मको सडक कालोपत्रे भएको छ ।